Intengo ye-HBO inyuka eSpain: manje ingama-euro angu-8,99 ngenyanga | Izindaba zamagajethi
I-HBO inyuka ngentengo eSpain: manje ingama-euro angu-8,99 ngenyanga
Izinsizakalo zokusakaza ziba ibhizinisi elibalulekile, ngisho nangaphezu kwethelevishini, futhi ukwazi ukufinyelela esikufunayo ukukubona kunesidingo kunenani elengeziwe abaningi abazimisele ukulikhokhela. Yingakho i-Netflix, i-HBO ne-Prime Video zisebenza kahle kakhulu emhlabeni jikelele. Kodwa-ke, ukuze zinikeze insizakalo esezingeni eliphakeme, lezi zinkampani zivame ukukhuphula intengo kancane kancane, njengoba kwenzeka ngeNetflix, intengo yayo yamanje ikude kunalokho ebikunikeza ngezinsuku zayo zokwethulwa. Manje i-HBO ithathe isinqumo sokukhuphula intengo naseSpain, futhi ithatha inani elisemthethweni lokubhalisile i-euro eyodwa ngaphezu kwentengo yamanje.
Uma sisondela, sifinyelela ekwabelaneni ngezinto okuphelele kakhulu
Lokhu kukhuphuka kusengaphansi kwezintengo ezinikezwa umncintiswano, futhi kungahle kubonakale kukhanga, ngamafuphi, sisele nokubhaliselwa kwanyanga zonke kwama-euro angama-8,99 ngenyanga, yize sikhumbula ukuthi ikhwalithi yesithombe ayifinyeleli ezinqumweni ezingama-4K njengoba yenza isibonelo i-Netflix noma i-Amazon Prime Video. Yiba ngangokunokwenzeka, Kusukela ngoNovemba 21 kuzokwenziwa ama-invoice entengo entsha ye-HBO, okungukuthi, ama-euro angama-8,99 Kubo bonke abasebenzisi, empeleni labo ababhalisa ngalesi sikhathi kuzodingeka bakhokhe le ntengo.
Mhlawumbe i-HBO ifuna ukusizakala ngokudonsa kochungechunge oluthile olukhulu njengeSilicon Valley noma iThe Maid's Tale ukwenza lokhu kukhuphuka okuncane ngaphandle kokubanga ukungqubuzana okungaka. Kodwa-ke, akuyona ukuphela kwento entsha, futhi nokuthi isikhathi sokuhlolwa kwe-HBO eSpain naso sincishisiwe, manje uzoba nesilingo samahhala samasonto amabili ukunquma ukuthi uyifanele ngempela insiza, okusho ukuthi, uhhafu walokho le nkampani ebikunikeza phambilini njengesilingo (okwakuyinyanga eyodwa).
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » I-HBO inyuka ngentengo eSpain: manje ingama-euro angu-8,99 ngenyanga
Ukusebenzisa imodi emnyama konga ibhethri elingu-30% ku-iPhone
Ungayenza kanjani i-WhatsApp yakho iphephe futhi uyivimbele ukuthi ingantshontshwa